Amarka Howlgalka, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Waa maxay amarada howlgalka weyn?
Injiilku waa warka wanaagsan ee ku saabsan furashada xagga nimcada Ilaah ee ku saleysan rumaysadka xagga Ciise Masiix. Farriinta ayaa ah in Masiixu u dhintay dembiyadeenna aawadood, in la aasay, oo la sara kiciyey maalintii saddexaad ka dib Qorniinku, ka dibna wuxuu u muuqday xertiisii. Injiilku waa warka wanaagsan ee aan ku gali karno boqortooyada Ilaah iyadoo loo marayo shaqada badbaadada ee Ciise Masiix (1 Korintos 15,1: 5-5,31; Falimaha Rasuullada 24,46:48; Luukos 3,16: 28,19-20; Yooxanaa 1,14:15; Mt 8,12:28,30) -31; Mk XNUMX-XNUMX; Fal XNUMX; XNUMX-XNUMX).
Erayadii Ciise ee xertiisii ​​ka dib sarakiciddiisa
Ereyga "amarkii weyn" ee badanaa wuxuu tixraacayaa ereyadii Ciise ee ku yaal Matayos 28,18: 20-XNUMX: "Ciise ayaa u yimid oo ku yidhi iyaga: amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey. Haddaba taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga, oo ku baabtiisa magaca magaca Aabbaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah oo bar iyaga inay dhawraan wixii aan idinku amray oo dhan. Oo bal eega, anigu waan kula joogaa maalin kasta ilaa dhamaadka dunida.
Xoog oo dhan ayaa laygu siiyay cirka iyo dhulka
Ciise waa “Eebaha wax walba” (Falimaha Rasuullada 10,36) oo isagu isagu waa kan ugu horreeya ee wax walba (Kolosay 1,18:XNUMX f.). Haddii kaniisadaha iyo rumaystayaashu kaqaybqaataan howlgalka ama wacdinta, ama wax alla wixii eraygu yahay, oo ay sameeyaan Ciise la'aanteed, markaa taasi waa mid aan midho dhalan.
Himilooyinka diimaha kale ma aqoonsana heerkiisa sarreeya sidaa darteedna iyagu ma aha kuwo shaqada Ilaahay qabanaya. Qayb kasta oo ka mid ah diinta masiixiga ee aan ku hor saarin Masiixa ku camal falkeeda iyo waxbaristiisa maahan shaqada Eebbe. Kahor Ascension aabaha jannada, Ciise wuxuu sii saadaaliyay: "... waxaad heli doontaa xoogga Ruuxa Quduuska ah oo kugu soo degi doona, oo waxaad ahaan doontaan markhaatiyaashayda" (Falimaha 1,8: XNUMX). Shaqada Ruuxa Qudduuska ah ee howsha ayaa ah inay hogaamiso rumaystayaasha inay u marag furaan Ciise Masiix.
Allaha soo diro
Goobaha masiixiga, “howlgalka” waxay heleen macnayaal kala duwan. Mararka qaarkood waxay u jeeddaa dhisme, mararka qaar ujeedo diineed oo waddan shisheeye ah, marmarka qaarkoodna aasaaska kaniisadaha cusub, iwm Taariikhda kaniisadda, “Howlgalka” wuxuu ahaa fikir fiqi ahaaneed oo ku saabsan sida Ilaah wiilkiisa u diray, iyo sida aabihii iyo Wiilku wuxuu soo diray Ruuxa Quduuska ah.
Ereyga Ingiriisiga "Howlgalka" wuxuu leeyahay xidid Laatiin ah. Waxay ka timid "missio" oo macnaheedu yahay "Waxaan dirayaa". Sidaa darteed, howsha waxaa loola jeedaa shaqada loo diro qof ama koox loo diro.
Fikradda "dirista" waxay muhiim u tahay fiqiga kitaabiga ah ee dabeecadda Eebbe. Ilaah waa Ilaaha soo diro.
Yaan diraa? Kumaa doonaya inuu noqdo wargeeyahayaga? wuxuu weyddiistaa codka Rabbiga. Ilaah wuxuu u soo diray Muuse Fircoon, Eliiyaah iyo nebiyadii kale oo u tegay Israa'iil, Yooxanaa Baabtiisaha, si uu uga marag furo iftiinka Masiixa (Yooxanaa 1,6: 7-4,34), isaga laftiisu wuxuu ahaa "aabaha nool" ee badbaadada dunida. loo diray (Joh 6,57; XNUMX).
Ilaah wuxuu u soo diraa malaa'igtiisa si ay u gutaan doonistiisa (Bilawgii 1; Mt 24,7 iyo meela kale oo badan) oo wuxuu Ruuxa Quduuska ah ugu diraa magaca Wiilka (Yooxanaa 13,41:14,26; 15,26:24,49; Luukos 3,20:21) ). Aabbuhu wuxuu "u diri doonaa Ciise Masiix" waqtiga wax walba la soo celiyo "(Falimaha XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Ciise wuxuu sidoo kale diray xertiisii ​​(Mt 10,5: 17,18), wuxuuna sharaxay in sida uu aabihi u soo diray dunida oo dhan uu u soo diro Ciise, Mu'miniinta, aduunkana (Yooxanaa 2:5,20). Dhammaan rumaystayaasha waxaa soo diray Masiixa. Waxaan ku jirnaa howgal xagga Eebbe ah oo sidan oo kale annaguna waxaan nahay ku-xigeenadiisa. Kaniisadda Axdiga Cusubi si cad ayey u fahamsan tahay oo waxay u fulisay shaqada Aabbuhu inuu yahay midiidinkiisa. Falimaha Rasuullada waxay marag u yihiin shaqada wacyigalinta maadaama injiilku ku faafay adduunka caanka ah. Rumaystayaasha waxaa loo diraa sida “farriinta Masiixa” (XNUMX Korintos XNUMX:XNUMX) si ay isaga ugu matalaan dadka oo dhan hortiisa.
Kaniisadda Axdiga Cusubi waxay ahayd Kaniisadda Waxqabadka. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ka dhex jira kaniisadda maanta ayaa ah in kuwa dadka isku taga kaniisadda u arkaan "howlgalka mid ka mid ah howlaheeda badan halkii ay ka ahaan lahayd xarun la qeexo" (Murray, 2004: 135). Waxay had iyo jeer ka fogaadaan shaqada iyagoo "u xilsaaranaya hawshan hay'adaha gaarka ah halkii ay ku qalabeyn lahaayeen dhammaan xubnayaasha sidii xog-haye" (ebnda). Halkii jawaabtii Ishacyaah "Waa i kan, i dir" (Is 6,9) jawaabta inta badan aan daahfureyn waa: "Waa kan! Cid kale u dir. ”
Qaabka Axdiga Hore
Shaqada Ilaah ee Axdiga Hore waxay kuxirantahay fikradda soo jiidashada. Dadyowga kale waxay ka naxdin lahaayeen dhacdada magnetic ee faragelinta Ilaah oo waxay damceen inay dhadhamiyaan oo arkaan sida Rabbigu u roonaado (Sabuurka 34,8: XNUMX).
Qaabka waxaa ku jira wicitaanka "Kaalay" sida ay ku caddeyneyso sheekada Sulaymaan iyo boqoradda Sheba. Oo boqoraddii Shebaa markay maqashay Sulaymaan, waxay ku timid Yeruusaalem ... Sulaymaanna wuxuu u jawaabay wax kasta, oo wax boqorka ka qarsoonaa oo uusan u sheegi karin ma jirin, oo wuxuu boqorkii ku yidhi, Waa run wixii aan maqlay oo ku saabsan falimihiinnu iyo xigmaddaydii dalkayga ku jirtay ”(1 Boqoradii 10,1: 7-XNUMX). Ujeeddada ugu weyn ee warbixintan ayaa ah in dadka loo jiheeyo meel udub dhexaad ah si runta iyo jawaabaha loo sharraxo. Kaniisadaha qaar ayaa maanta ku dhaqma moodal noocan oo kale ah. Qeyb ahaan waa ansax tahay, laakiin ma ahan qaab buuxa.
Badanaa Israa’iil looma dirin xuduudaheeda si ay u marag furaan ammaanta Ilaah. "Ma ahayn hawshii u tagista quruumaha iyo in lagu wacdiyo runta la muujiyey oo loo aaminay dadka Ilaah" (Peters 1972: 21). Markii Ilaah Yoonis farriin uga soo diray basaska dadka aan reer binu Israa'iil ahayn ee Nineweh deggan, Yoonis aad buu u argaggaxay. Qaabka noocan ahi waa mid gaar ah (ka akhri sheekada howlgalkaan ee ku yaal kitaabka Yoonis. Ilaa maanta macallin ayaa noo ah).
Moodooyinka Axdiga Cusub
“Tani waa bilowgii injiilka Ciise Masiix, oo ah Wiilka Ilaah” - waa tan sida Markus, oo ah qoraagii ugu horreeyay ee injiilka, uu dejiyo macnaha guud ee kaniisadda Axdiga Cusub (Mk 1,1). Waxay wax walba ku saabsan yihiin injiilka, warka wanaagsan, iyo Masiixiyiintu waa inay yeeshaan "wadaagis injiilka" (Filibos 1,5), oo macnaheedu yahay inay ku nool yihiin oo ay wadaagaan injiilka badbaadada ee Masiixa. Ereyga "injiilka" asalkiisu waa - fikirka ah in lagu faafiyo injiilka, oo lagu dhawaaqo badbaadada gaalada.
Sida qaar mararka qaar loogu jiiday reer binu Israa'iil caannimadooda muddada-gaaban, ayaa qaar badan baa Ciise Masiix u soo dhowaaday caannimadooda iyo karaamadooda. Laakiin goor dhow warkiisii ​​waa gaadhay dhulkii Galili oo dhan (Mark 1,28). Ciise wuxuu yiri: "Ii kaalaya" (Mt 11,28:9,9), iyo "i soo raac" (Mt 6,68: XNUMX). Qaabka badbaadada ee imaatinka iyo raacitaanka ayaa wali shaqeynaya. Waa Ciise kan leh ereyada nolosha (Joh XNUMX:XNUMX).
Mark ayaa sharxay in Ciise "yimid Galili oo uu ku wacdiyey injiilka boqortooyadii Ilaah" (Mk 1,14:13,18). Boqortooyada Ilaah ma aha mid gaar ah. Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay in “boqortooyada Ilaah waa abuur iniin khardal ah oo nin qaaday oo beertay. geed baa koray oo sii noqday, oo haadka samaduna laamihiisu waxay degeen laamihiisa (Lk 19-XNUMX). Fikradda ayaa ah in geedku si weyn ugufiican yahay shimbiraha oo dhan, mana ahan keliya hal nooc.
Kaniisadda kuma eka, sida shirkii reer binu Israa'iil oo kale. Waa mid loo dhan yahay iyo farriinta injiilku annaga keliya maahan. Waxaannu markhaatiyaal ka nahay ”dhammaadka dhulka" (Falimaha Rasuullada 1,8: 4,4). “Ilaah wuxuu u soo diray Wiilkiisa” si innaga oo ah carruurtiisii ​​innaga ugu noqdo furasho (Gal 1: 2,2). Raxmada furashada Ilaah ee loo maro Masiixa ma ahan annaga oo keliya, "laakiin adduunka oo dhan" (XNUMX Yooxanaa XNUMX: XNUMX). Innagoo ah carruurta Ilaah waxaa dunida loo diraa markhaatiyo nimcadiisa. Howlgalku wuxuu ka dhigan yahay in Ilaah dhaho "Haa" aadanaha, "Haa, waan jiraa oo haa, waxaan doonayaa inaan ku badbaadiyo."
Diritaanka adduunka ma ahan shaqo la qabanayo. Waa xiriir uu la leeyahay Ciise kan noo soo diray si aan ula wadaagno "wanaagga Eebbe ee u horseeda tawbadkeen" dadka kale (Rooma 2,4: 2). Waa jacaylka naxariista Masiixa ee agape ee inaga dhexaysa taas oo nagu kallifaysa inaan dadka kale la wadaagno injiilka jacaylka. “Jacaylka Masiixu wuu ina waaninayaa” (5,14 Korintos 4,6:XNUMX). Howlgalku wuxuu ka bilaabmaa guriga. Wax kasta oo aan qabanno waxay ku xiran yihiin ficilkii Ilaah ee "Ruuxa ku diray qalbiyadeenna" (Gal XNUMX: XNUMX). Waxaa nalooga soo diray Ilaahay xaasaskayaga, qoysaskeenna, waalidkeen, saaxiibbadayada, derisyada, asxaabta shaqada iyo kuwa aan kula kulanno dariiqa, qof walba meel kasta.
Kaniisaddii hore waxay aragtay ujeedadeeda ka qeybgalka Amarka weyn. Bawlos wuxuu u arkayey kuwa aan ereyga iskutallaabta ka ahayn inay yihiin kuwa lumi doona haddii aan injiilka aan iyaga lagu wacdin (1 Korintos 1,18:2). Iyadoo aan loo eegin in dadku ka jawaabaan injiilka iyo haddii kale, rumaystayaashu waa inay noqdaan “udgoonka Masiixa” meel kastoo ay tagayaan (2,15 Korintos 1:9,16). Bawlos wuxuu aad uga welwelsan yahay in dadku maqlaan injiilka oo uu u arko faafinta ay tahay mas'uuliyad. Wuxuu yiri: "Maadaama aan injiilka ku wacdiyo, kuma faani karo; maxaa yeelay waa inaan sameeyaa. Oo waa ii hoog haddaanan dadka injiilka ku wacdiyin. (1,14 Korintos 15:XNUMX). Wuxuu soo jeedinayaa inuu "deyn ku leeyahay Gariigta iyo Gariigta, kuwa caqliga leh iyo kuwa aan caqliga lahayn ... inuu injiilka ku wacdiyo" (Rooma XNUMX: XNUMX-XNUMX).
Bawlos wuxuu lahaa rabitaanka inuu qabto shaqada Masiixa dabeecad mahadnaqid leh oo rajo ka buuxaan “maxaa yeelay jacaylka Ilaah baa qalbiyadeenna ku dhex shubay Ruuxa Quduuska ah” (Rooma 5,5: 1991). Isaga ayaa mudnaan gaar ah u leh nimcada in la ahaado rasuul, taas oo ah, mid loo soo diray "sidii aan u qaban lahayn shaqada Masiixa." “Masiixiyaddu waa mid diimeed dabeecadda ama dayacaysa raison d'etre”, micnaheedu waa ujeedkiisa oo dhan (Bosch 2000, 9: XNUMX).
Sida bulshooyinka badan maanta, dunidu waxay cadaaw u ahayd injiilka wakhtigii Falimaha Rasuullada. "Laakiin waxaan ku wacdinnaa Masiixa iskutallaabta lagu qodbay, Yuhuudda xanaaqsan, nacasnimada aan Yuhuudda ahayn" (1 Korintos 1,23:XNUMX).
Farriinta masiixiga lama soo dhaweyn. Kuwa aaminka ah, sida Bawlos, “way adkaan jireen dhinacyada oo dhan, laakiin cabsi la'aan… way baqeen, laakiin isma dhiibin… waa la silciyey, laakiin lama dayrin” (2 Korintos 4,8: 9-2). Mararka qaar kooxaha rumaystayaasha oo dhami waxay dhabarka u jeediyeen injiilka (1,15 Timoteyos XNUMX:XNUMX).
Ma fududaan in dunida loo diro. Caadi ahaan Masiixiyiinta iyo kaniisadaha waxay ku yaalleen meel "khatar iyo fursad" (Bosch 1991, 2000: 1).
Markii la aqoonsado oo la qabsado fursadaha, Kaniisaddu waxay bilaabatay inay ku korto tiro ahaan iyo qaan gaadh ahaan ruux ahaaneed. Kama aysan baqin inay kadeediso.
Ruuxa Quduuska ahi wuxuu rumaystayaasha u horseeday fursadaha injiilka. Laga soo bilaabo wacdintii Butros ee ku jirta Falimaha Rasuullada 2, Ruuxu wuxuu fursado u yeeshay Masiixa. Kuwani waxaa la isbarbar dhigaa albaabbada iimaanka (Falimaha Rasuullada 14,27:1; 16,9 Korintos 4,3: XNUMX; Kolosay XNUMX: XNUMX).
Ragga iyo haweenku waxay bilaabeen inay injiilka ku fidiyaan dhiirranaan. Dadku waxay ka mid yihiin Filiboy sida ku xusan Falimaha 8 iyo Bawlos, Silas, Timoteyos, Aquila, iyo Priszilla Falimaha Rasuullada 18 markay aasaasay kaniisadda Korintos. Wax kasta oo ay rumaystayaashu sameeyeen, waxay u sameeyeen sidii "wada-hawlgalayaasha injiilka" (Phil 4,3).
Sida Ciise loo soo diray inuu inaga mid noqdo si ay dadka u badbaadaan, rumaystayaasha waxaa loo diray ujeeddada injiilka si ay "wax walba u noqdaan wax walba" inay injiilka la wadaagaan dunida oo dhan (1 Korintos 9,22, XNUMX).
Buugga Falimaha Rasuullada wuxuu ku dhammaanayaa sida Bawlos u fulinayo amarkii weynaa ee adeegsiga ee Matayos 28: "Wuxuu wacdiyey boqortooyadii Ilaah, oo Rabbi Ciise Masiix baray isagoo aan xanaaqsanayn oo dhan" (Falimaha Rasuullada 28,31:XNUMX). Waxay tusaale u tahay kaniisada mustaqbalka - kaniisad howleed.
Amarka howlgalka weyn waa in la sii wado wacdinta injiilka Masiix. Dhammaanteen isagaynu dunida u soo diray isaga, sidii uu Aabbaha Aabbaha ugu soo diray. Tani waxay muujineysaa kaniisad ay ka buuxaan rumaystayaal firfircoon kuwaas oo samaynaya ganacsiga aabaha.